Halyeygii Reer Brazil Ee Roberto Carlos Oo Sameeyey Ballan-qaad Ka Farxiyey Jamaahiirta Real Madrid | Laacib.net
10-11-2018 Abdiwahab A. Abeye Comments Off on Halyeygii Reer Brazil Ee Roberto Carlos Oo Sameeyey Ballan-qaad Ka Farxiyey Jamaahiirta Real Madrid
Halyeygii reer Brazil ee Roberto Carlos ayaa sameeyey ballan-qaad ka farxiyey jamaahiirta kooxdiisii hore ee Real Madrid, kaddib markii uu farta ku fiiqay kalsooni uu ku qabo xiddig ka tirsan naadigaas oo wacdaro dhigi doona.
Roberto Carlos oo muddo ka badan 11 sannadood u ciyaaray Real Madrid, ayaa waxa uu sheegay in da’yarka ay isku waddanka yihiin ee Vinicius Junior uu taariikh ku samaysan doono Real Madrid iyo guud ahaan dunida, taasna uu ku muujiyey kulankii Plzen ee Champions League oo beddel lagu soo geliyey.
“Mar walba waxaan u rajeeyaa ciyaartooyada reer Brazil inay ka mid noqdaan kuwa ugu wanaagsan Yurub. Vinicius aad ayuu u da’yar yahay waxaana ka tegay Flamengo isagoo khibrad badan helay. Way u fiicnayd inuu ciyaaray kulankii Plzen, waxaanu ku samayn doonaa Real Madrid iyo dunidaba taariikh. Waa ciyaartoy casri ah, xarfad badan, masuul ah oo dhamaystiran.” Sidaas ayuu yihdi Roberto Carlos oo ah safiirka Real Madrid.
Dhinaca kale, waxa uu halyeyga reer Brazil tilmaamay in guushii ay Real Madrid ka gaadhay Viktoria Plzen ay kalsoonida usoo celin doonto ciyaartooyada oo dhibaatoonayey xili ciyaareedkan, waxaanu yidhi: “Waxay ahayd guul weyn, waxaanay siin doontaa kalsooni ay kusii wadaan shaqada iyo horumarinta kooxda oo mar kale ay ku gaadhi karaan finalka oo noqon doona garoon ku yaalla halkan caasimadda.”
Roberto Carlos waxa uu ku dooday in Cristiano Ronaldo uu ka dhigay Juventus kooxda sannadkan loo saadaalinayo Champions League, uuna kusoo kordhiyey awood iyo khibrad badan.